China 24V dc သည်ပါးလွှာသော LED မီးအလင်းရောင်ရှိသည့်သေတ္တာများကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ကြော်ငြာခြင်း Huayuemei
24V dc သည်ပါးလွှာသော LED မီးချောင်းများကိုပါးလွှာသော light box box တွင်ကြော်ငြာရန်ပြုလုပ်ထားသည်
ပစ္စည်း တင်းကျပ်သော LED ကြိုး
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် 500 * 7.8 * 0.2mm
LED အရွယ်အစား SMD2835
LED မီး 42PCS
အရောင်ဖျော့ဖျော့ 2800-12000K (စိတ်ကြိုက်)
ထောင့်ကိုကြည့်ပါ 120 °
ခိုင်မာသော LED အလင်း,အလင်းဘားကိုချွတ် နှင့်မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်များအတွက် Aluminum တင်းကျပ်သောမီးလ်တာ
24Volt တင်းကျပ်သော LED light bars နှင့် Aluminum light bars fixture တို့သည်ထောင့်အမျိုးမျိုးသုံးရန်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။
အရည်အသွေးမြင့်၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်၊ အလင်းရောင်ပြင်းထန်မှု၊ သက်တမ်းရှည်ခြင်း၊ အပူနည်းသောအလင်းရောင်အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။
အိမ်သုံးလေသံအလင်းရောင်၊ လက် ၀ တ်ရတနာကောင်တာ၊ စာအုပ်စင်၊ ကက်ဘိနက်အောက်၊ ဗီရို၊ မျက်နှာပြင်အဖုံး၊ ဗီရို၊
အိမ်၊ စီးပွားဖြစ်နှင့်စက်မှုဆိုင်ရာအလင်းရောင်စီမံကိန်းများအတွက်အေးမြသောအဖြူရောင်၊ နွေးထွေးသောအဖြူရောင် LED မီးများရှိမီးဘားများကိုရနိုင်သည်။
တင်းကျပ်သော FR4 နှင့်လူမီနီယံတို့ဖြင့်တင်းကျပ်သောအခြေခံပစ္စည်းကို သုံး၍ ခိုင်မာသောအလင်းဘားစီးရီး၊ အစရှိသည့်တည်ဆောက်ပုံတပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းများအတွက်ဝက်အူ၊ ကလစ်နှင့်အခြားအရာများလိုအပ်သည်။ အချို့သောအရှည်များသို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုတင်ထားသည့်ပုံမှန်စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အားဒီဇိုင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောအင်္ဂါရပ်များကိုအောင်မြင်စွာရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ဥပမာ - အပေါ်အမြင်၊ ဘေး - အမြင်၊ အလွန်ပါးလွှာသော၊ မြင့်မားသော - သိပ်သည်းမှု။
1.High အလင်းထိရောက်မှု 130LM / W; အလားတူထုတ်ကုန်ထက် 50% opitcal ထိရောက်မှု၏ပိုလျှံအတွက်အမှန်တကယ်စမ်းသပ်မှု
2. TOP SMD သည် 2835 သို့မဟုတ် 5050 ကို LED / 130lm / w ထိထိရောက်စွာထွန်းလင်းပေးနိုင်သည်
၃။ စီးပွားရေးအရ ဦး ဆောင်သောနောက်ခံအလင်းတန်းများ
၄။ မာကျူရီကင်း။ အန္တရာယ်ရှိသောရောင်ခြည်များ၊ တုန်ခါမှုမရှိ၊ ချက်ချင်းစတင်ခြင်း
၅။ အနည်းဆုံး ၉ စင်တီမီတာလိုအပ်သောအတိမ်အနက်ကိုဂရပ်ဖစ်တွင်တွေ့ရသည့်အစက်အပြောက်များမရှိနိုင်ပါ
6. မြင့်မားသောအရောင် rendering အညွှန်းကိန်း: Ra> 75/85
၇။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ ဝက်အူတစ်ခုသာလိုအပ်သည်
8. built-in စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ, ဗို့အား dc24v ရိုက်ပါ
၉။ အသက်ရှည်> 50000hr
၁၀။ အာမခံ ၃ နှစ်
၎င်းသည် LED လမ်းညွှန်ပြား၊ ပါးလွှာသောအလင်းသေတ္တာများအတွက်အကျုံးဝင်သည်။ ကိုယ်ထည်အလှဆင်ခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောဒီဇိုင်း (ဟိုတယ်၊ ကလပ် / KTV နေရာများတွင်နံရံများ၊ မျက်နှာကျက်လိုင်းကြိုးထိုးဒီဇိုင်းနှင့်လေထုမှအလှဆင်ထားသောဆန့်ကျင်ဘက်)
Skyline အလင်းရောင် (အဆောက်အ ဦး များ၊ နံရံဆိုင်းဘုတ်များ၊ အားလပ်ရက်အလှဆင်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားနေရာများ)
အိမ်တွင်းမှောင်မိုက်ထိုးအစွန်း (ဘောင်၊ ဘား၊ ဝိုင်ဘူး၊ ဗီရို၊ တီဗီဗီရို…)
Automotive Beauty (ကား၊ စက်ဘီး…) ။ မီးအလင်းရောင်သေတ္တာများနောက်ခံ၊ ပိုစတာသို့မဟုတ်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်နောက်ခံသင်္ကေတများအတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဘက်ရှိဆိုင်းဘုတ်များ၊ အတွင်းမီးထွန်းထားသည့်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ၊ မျက်နှာပြင်ကြီးများ၊ ဗိသုကာနံရံများနှင့်ကော်လံများ၊
ရှေ့သို့ ထည်အလင်း box ကိုများအတွက် Programmable LED Panel ကို
Dimmable Led တင်းကျပ်ဘားအလင်း
တင်းကျပ်ဘား ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
တင်းကျပ် Led ဘား Module
Rgb Led တင်းကျပ်ဘား
စူပါအလင်း Led တင်းကျပ်ဘား
အပြည့်အဝအရောင် RGB တင်းကျပ်သော ဦး ဆောင်အလင်း strips တွေ
ကားအတွက်တင်းကျပ်သော LED မီးကြိုး
2835 module ကိုတင်းကျပ်သော ဦး ဆောင်ဘား
ပါးလွှာသော ဦး ဆောင် panel ကိုများအတွက်တင်းကျပ်သော ဦး ဆောင်ချွတ်
5050 စူပါတောက်ပ ဦး ဆောင်တင်းကျပ်ချွတ်